E bipụtara Nkwupụta na 'Ọnọdụ nke imeghe maka Istanbul' | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulBipụtara Nkọwa na 'Ọnọdụ nke imeghe maka Istanbul'
Normalization abụghị ịlaghachi n'oge gara aga
MMtù Na-ahụ Maka Ndụmọdụ EMI. Na akụkọ; Turkey bụ mbelata ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'ozuzu; agbanyeghị, ekwuputara na enweghị data dị mma gbasara Istanbul. Akuko a tụrụ aro na mkpebi ịkwaga na ọkwa nke usoro iwu ka emechara nyocha izu abụọ.
Na Nkwupụta nke Scientlọ Mmụta Sayensị IMM, e kwuru echiche ndị a site n'ikwu ịdị mkpa nke iwu nghọta site na ịgwa ọha na eze oge niile.
Mee Nyocha NA Abụọ
“Egotala otu ihe metụtara n'ọrịa COVID-19. Ekwesiri ịhazi usoro nke ịlaghachi ndụ dị ka nke nta nke nta, na mba na mpaghara ma kwekọọ n'ụkpụrụ sayensị sayensị ahụike ọha na enweghị ike ịgafe na-enweghị izute ụfọdụ ọnọdụ site na iji nlezianya na-atụle usoro nke ọ bụla na-emetụta njikọta ọhụụ.
Ihe isi ike a ga-ahụ na usoro mmegharị na-ebu ihe egwu nke ibughari na ikpe COVID-19. Maka nke a, usoro ọ bụla a dị ezigbo mkpa iji ghara ịlafu oge na mbọ iji zere ịlaghachi azụ.
Ekwesiri ileba anya n'ọnụọgụ ọhụrụ ọhụụ achọpụtara n'oge mmeghe a ga-ekpebikwa usoro ọhụụ site na ịchọpụta nsonazụ mmeghe. N'ọnọdụ a, emepe emepe, nke dị n'ọtụtụ, nke nwere ike imetụta nnukwu mmadụ, ka aga-eji nwayọ rụọ ọrụ, ka emechara izu abụọ, a ga-agafe usoro nke ọzọ iji hụ nke ọma nsonaazụ nke ọ bụla. Na mgbakwunye, ntụgharị kwesịrị ịbụ usoro ụzọ abụọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, laghachite ọsọ ọsọ.
Tugharị kwesịrị ịmalite site n'ihe omume dịkarịsịrị ala, mpaghara ndị njupụta dị ntakịrị na ndị ọgbọ dịkarịrị n'ihe ize ndụ Ya mere, na mbu mmadụ kwesiri ịmalite iji oghere ọha site na irubere iwu nke anya anụ ahụ (1 Mita Rule), mana n'aka nke ọzọ, ebe ndị nwere kọntaktị dị elu dị ka ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ salesụ, ụlọ akwụkwọ, ebe a na-ere ngwaahịa ndị na-adịghị mkpa ga-ahapụ maka ụbọchị ọzọ.
ISTANBUL KWES HAVER AN OGB ORR OR ORBỌ ỌR.
Istanbul kwesịrị ịnwe mmegharị mmegharị ọzọ, dị ka obodo mepere emepe nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu na ógbè ndị ọrịa ọrịa kasị emetụta. N'akụkọ a, nke na-enyocha nrụgharị usoro maka mpaghara mpaghara Istanbul, ebum n’uche ịkọ usoro nzọụkwụ nke mpaghara dabere na njirisi sayensị nke ndị otu tozuru etozu na ụwa sayensị ji atụ aro ya. kwuputara. Onu ogugu enwere ugbua kariri pasenti 1.
AH RECR HE IWU AHALR REC RECBỌCH REC EGO
Healthtù Ahụ Ike haswa akọwaala usoro isii iji malite iwepu ihe mgbochi buru ibu. Mba ga-enwerịrị usoro ndị a:
1. Ihe akaebe na akụkụ COVID-19 nọ n'okpuru,
Ikike ncheta ahụike ọha na ahụike zuru oke maka nchoputa, ikewapụta, nnwale, nsuso ịkpọtụrụ na iche,
3. Mbelata ihe egwu gbawaranụ na gburugburu nwere ezi uche - ụlọ ndị nọọsụ, ebe ndị a na-elekọta ndị ọrịa,
A na-etinyere ihe nchebe gụnyere anya anụ ahụ, ịsa aka, idebe mposi na nlekọta ahụ ọkụ na ebe ọrụ.
5. Ijikwa ihe ọghọm nke ihe si na mpaghara ndị nwere nnukwu mmetọ,
6. Obodo n’inwe olu na nghọta na ngaghari, na-esonye na nhazi ma nwee ntinye
AKWANKWỌ na njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya dị ezigbo mkpa.
Maka Istanbul, nke ekwuru na ọ dịkarịa ala pasent 60 nke ikpe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa ịgwa gọọmentị obodo ahụ na ntughari ma nweta echiche ha. Ekwesịrị ịkọwapụta data ziri ezi dịka nkọwa okwu ikpe nke WHO dị kwa ụbọchị maka Istanbul, n'otu aka ahụ, data a kwesịrị ịdị maka obodo ndị ọzọ.
Society bụkwa ihe dị mkpa na mmalite mmegharị ma echefula na ọ ga-akpụzi ya site na omume ndị mmadụ na ọha mmadụ. Otu o kwesiri imata na mmalite mmeghe abụghị usoro nke ihe ọ bụla laghachiri n'oge ọrịa mbu, ọ bụ ihe ndị aga-etinye na oge a ga-eme, nakwa na ntụgharị nke ga-ebilite n'oge mmeghe ga-agbanwe ọnọdụ ahụ.
Ozugbo ekpebiri usoro a, ekwesịrị ịkekọrịta ya na ndị obodo ma a ga-ahapụ ike itinye aka na ndị otu. Ekwesịrị ịkọwa ihe kpatara ya / ihe kpatara usoro a ga-enyere aka wee kwekọọ na nkebi ahụ. Inye nkenke ubochi n’emeghi ka nkowaa ihe kpatara mmekorita a na - ebute nchekwube na ndi mmadu. Ọ dị ezigbo mkpa ịnabata ọha mmadụ dịka akụkụ nke usoro na isonye na usoro ahụ, ka ị nwee nghọta zuru oke banyere usoro mgbanwe.
N'ime usoro iwu, nkwado obodo na nnabata nke azụmaahịa na iwu dị ezigbo mkpa. N'iburu n'uche nsogbu ndị a tụlere na ihe ndị a na - emepe emepe, ekwesịrị ịkesara ndị ọha ahụ ihe doro anya. Mgbe ozi ahụ apụtaghị; mgbagha, nchekasị, akparama agwa, mgbasa nke ozi ugha, nkwenye na ozi ezighi ezi. Yabụ, ibido oghere na usoro a ga-enwerịrị nghọta.
Ọ dị ezigbo mkpa na ndị ọrụ uwe ojii na-eme usoro nke ime ụlọ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ nke ndị ọrụ obodo na-arụ ọrụ nke ndị ọrụ obodo na-etinye usoro nke ịdị ọcha na usoro ịdị ọcha. Usoro a nwere ike ịdị irè naanị na njikọta na nkwado nke ndị ọchịchị obodo na ndị ọchịchị mpaghara.
NSOGBU N ’OBIANYA N’IHI NA ISTANBUL
Turkey hoputara n'ozuzu banyere Istanbul gbakwunyere na-akọwapụtakarị ụfọdụ nke data ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ data ọ bụla.
Ndi amachaghi data di n’ule nyochara ihe a n’ile anya na nyocha emere n’onodu iju abali n’etiti Eprel, onu ogugu ohuru na Turkey na mbido onwa Mee, ma nke ahuru na ogba aghara nke izu nke abua.
mbelata ọnụ ọgụgụ ọnwụ dị ka njirisi ndị ọzọ, Turkey nwere nchegbu mana enweghị ya na data izugbe banyere Istanbul. Agbanyeghị, dị ka nyocha emere site na data nke IMM Directorate of Cemeteries, ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ na Istanbul agbadala n'ime ụbọchị 14 gara aga. Ugboro nke ọrịa n'etiti ndị ọkachamara nlekọta ahụike a kpọtụrụ aha na nkọwa ọzọ amaghịkwa.
Gini mere 2013 ga-eji gaa Railtex 10 Fair!
Red Brigades nyere nkwupụta megide Lyon-Torino akwa ụgbọ okporo ígwè
Alstom tọhapụrụ desktọọpụ akwụkwọ ahụaja maka mba
Hook 50 bipụtara akwụkwọ banyere Tattooing, nke mbụ na Turkish na-echeta nke afọ
Ihe eji arụ ọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ na njikwa akuko
Ụgbọ njem Kayseri mara ọkwa maka ọkwa echefu
Moovit weputara 2016 Global Public Transport Usage Report
Burulaş na-ebipụta usoro ihe omume Bursa Yunuseli Airport
TCDD Na - eme Hemzemin Geçit Animation
TCDD Transportation Inc. Iwu na-enye gị banyere Nkwalite na Mgbanwe Mgbanwe
Nkwuputa Mgbasa Ozi nke Onye Ọhụụ TÜVASAŞ 43
UTİKAD Bipụta E-Commerce Report
Ozi a weputara identorlu Train Report Report 416 ubochi gasiri
Òtù Ahụ Ike Ụwa
Gburugburu Turkey normalization
Akụkọ Report System nke Malatya bipụtara
Akuko egwu banyere tram na Izmir
Akuko banyere Railway Demand from Musiadtan Çorum
Akụkọ atọ dị iche iche banyere ọnwụ nke Ebru Gültekin Ilıcalı
Ministri akụrụngwa nke Ukraine kekọrịtara usoro mbido nke Transportgbọ njem na njem ndị njem
Akuko banyere oru ngo ndi Izmir